Sababtoo ah noocyada kala duwan ee vietne-yada waxay yeelan doonaan baahiyo kala duwan.
Qaar ka mid ah martigeliyeyaasha shabakadaha qaarkood waxay ku fiicnaan karaan meelaha qaarkood – sida xawaaraha iyo tignoolajiinka ugu dambeeya halka kuwa kale ay xooga saaraan inay bixiyaan adeeg deggan oo deg deg ah. A "martigeliyaha webka wanaagsan" mar Walba ma dammaanad qaadaya 100% isticmaalayaasha 100% qanacsanaanta.
Tani waxay si gaar ah u tahay marka ir timaado vietne-ka ganacsiga martigelinta. Anigoo ah ganacsade ganacsade naftayda – Anigu run ahaantii waan fahamsanahay sababta ay ganacsiyada badanaa u taxaddaraan oo ay ka doortaan martigooda webka. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhajiso adeegga saxda ah qiimaha saxda ah iyo tayada saxda ah. Martida webka "ugu fiican" ma noqon karto doorashada ugu fiican.
Web HostQiimaha GelitaankaSSH HelitaankaEmail marti ah? Bezmaksas SSL Cert.Socdaalka Safarka ee Bilaash ahDhismaha Raadiyaha fudud
InMotion hostings 3,99 USD / mēn Haa Haa Gavaarida SSL & Āns šifrēt Haa BoldGrid
Soo dhaweynta USD 0,80 mēnesī Haa (Premium ++) Haa Iekšējs (Premium ++) Haa Iekšējais
Soo iibso 29,00 USD / mēn Maija Maija Iekšējais Maija Iekšējais
Vietne 3,95 USD / mēn Haa Haa Aan isku dayno Haa Weebly
Starpnieks USD 5,00 mēnesī Haa Haa Automātiska SSL Haa Iekšējais
A2 mitināšana 3,92 USD / mēn Haa Haa Gavaarida SSL & Āns šifrēt Haa Iekšējais
Daruuraha 10,00 USD / mēn Haa Maija Aan isku dayno Goobta koowaad kaliya Maija
Wix USD 8,50 mēnesī Maija Maija Iekšējais Haa Wix
– wuxuu bilaabmaa USD 3,99 / mēn
– wuxuu bilaabmaa USD 0,80 / mēn
– wuxuu bilaabmaa $ 29 / mēn
– wuxuu bilaabmaa USD 3,95 mēnesī
– wuxuu bilaabmaa USD 4 / mēn
– wuxuu bilaabmaa USD 3,92 / mēn
– wuxuu bilaabmaa USD 10 / mēn
– wuxuu bilaabmaa USD 8,50 / mēn
1.7 Xaaladda Daraasadda # 2: Hadafka Xogta ee Blog + Ganacsi vietne
1.8 Xaaladda Daraasadda # 4: Xogta La Xidhiidha ee Dukaanka e-komercija / Online
2 Atgādinājums: Isbarbardhig Sare Ganacsiga Yar ee Ganacsiga
Waxaan hadda qodxi doonaa mid kasta oo ka mid ah adeegyadan martigelinta ganacsiga. Si Looga dhigo kauliņu-u-eegiddaydu inay noqdaan vidus waxtar Leh oo caawimaad Leh, waxaan Gelin doonaa diiradda dheeraad ah astaamaha muhiimka u ah ganacsiga SIDA waxqabadka martigelinta, astaamaha-ganacsiga, KA kauliņu iibka iibka, Ijo qiimaha lacagta.
InMotion Hostings – Uzņēmējdarbības mitināšanas vietne wuxuu ka bilowdaa USD 3,99 mēnesī / mēnesī> Riix halkan si aad u dalbato hadda.
Waxqabadka serverka adag – Waqti fiican (99,95%) iyo waqtiga jawaabta (<450 ms)
Diiwaangelinta domēns ee bilaashka ah, Shahaadada SSL iyo kaydinta mērķis kasta
Talo: Qorshaha InMotion bija vidusmēra fiican ganacsiga yaryar / kuwa dhexdhexaad ah?
Ganacsiyada cusub iyo kuwa yaryar – Bilow InMotion enerģijas plāna plāns – ee 5,99 USD / mēn, macaamiisha waxay ku martiqaadi karaan xayirada 6 oo leh SSL lakag la’aan ah oo idil oo idil iyo dhamaan sifooyinka muhiimka ah e-commerce.
Kuš cusbooneysii VPS-1000HA-S ama VPS-2000HA-S kadib markii ganacsigaaga uu korayo.
Waxqabadka serverka adag – Waqti fiican (99,95%) iyo waqtiga jawaabta (<600 ms)
Si aad ah u jaban si aad u bilowdo, Qorshaha Guud ee Halista ah ayaa ka bilowda $ 0.80 / mo loogu talagalay isticmaalayaasha cusub ugu fiican ee ganacsiyada yaryar raadinaya heshiisyo waaweyn
Dhismaha vietne-ka dhejinta iyo dhajinta (oo lagu sameeyo guriga) un fudud loo abuuro vietne
Noocyada ammaanka ee dheeraadka ah, magaca bilaashka ah, iyo kaydinta iespēja kasta ee qorshaha Premium iyo Qorshaha Ganacsiga
Haddii aad u baahatid waa bog sahlan oo lagu sawiro ganacsigaaga (barta internetka), ka dibna ha eegin wax dheeraad ah – Martinger waa jawaabtaada. $ 0.80 / mēn Qorsho Hal Xun waa kan ugu jaban (plaši lagu kalsoon yahay) ganacsiga martigelinta ee aad marwalba heli karto.
Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, in aad heshid waxa aad bixiso – waxyaallo faa’iido leh, sida naqshadda auto, shaqo aan xadidneyn, iyo SSL lacag la’aan ah, ayaa lagu heli karaa oo mituya qorshooyinka Premium ama Business. Waxaan kugula talin lahaa inaad tagto (ama kaddibna dib u cusbooneysiiso) macaamiilaha martigelinta haddii aad si dhab ah uga ganacsaneyso ganacsigaaga.
Diyaarso, qaabka ugu caansan e-holka, wuxuu awood u leeyahay in ka badan dukaamada online 800 000 ee 2020> riix halkan si aad u dalbato.
Soo iibsashadu waa, si daacad ah, pricier ka badan inta badan dhismayaasha kale ee suuqa. Hase yeeshee, sidoo kāposti waa mid aad u go’an ekaabta e-komercija taas oo noqon karta mid aad u weyn oo loogu talagalay ganacsiyada, gaar ahaan marka loo eego qaabka isdhexgalka POS. Qaab dhismeedka qiimaha waa mid fudud oo kaliya waxaad u baahan tahay inaad isku xirto ganacsigaagu u baahan yahay mid sax ah.
Muuqaal redzēja ee bogga SiteGround> Riix halkan si aad u dalbato hadda.
Qorshaha Bilowga – USD 3,95 mēnesī
Qorshaha GrowBig – USD 5,95 mēnesī
Qorshaha GoGeek – USD 11,95 mēnesī
Waxaa aasaasay Michael Lavrik iyo John Quaglieri, InterServer waa shirkad cusub oo Ņūdžersija ah oo ku jirtay ciyaar tan iyo 1999.
Ugu horreyntii wuxuu bilaabay inuu noqdo xisaab furan oo loo yaqaan ‘virtual-account re-Sellere’, bixiyaha martigeliyaha ayaa koray sannadihii 17 ee hore waxaana uu hadda ka shaqeeyaa labo xarumo xogeed oo ku yaal New Jersey wuxuuna ku dheji.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan InterServer waa wax qabadkooda adag ee server-ka, so dirista ballanqaad ee damaanad qaadka ah, iyo qiimaha isqorista. Shirkadda waxay ballanqaadeysaa inaysan waligood kor u qaadi doonin qiimahooda inta lagu jiro cusboonaysiinta isla markaana ay ku sii hayn doonaan adeegsiga kombuyuutarkooda ka yar 50% ka faa’ideysiga xawaaraha taraafikada ee kad. Sidoo kale, muujinta Iimeylka cusub ee Dammaanad-qaadka E-maylka wuxuu hubiyaa emayllada ganacsi ee muhiimka ah ee aad dirtay inaysan ku xayiran doonin sanduuqa qashin-qaateyaasha qaataha.
Goobta goobta Maraykanka oo kalija
Dhamaan-qof-wada-xayeysiintu waxay ka bilaabmaysaa USD 5,00 / bishii
Isku diena inaad lacag la’aan ah (mar kasta oo lacag ah damaanad ah)
Doorashada 4 meelo kala duwan oo serveris ah
Qiimaha A2 Hostings waxuu daboolayaa baahiyo ballaadhan sababtoo ti tirada badan ee noocyada qorshaha ee ay leeyihiin. Ganacsatada yaryar waxay ka bilaabi karaan mid ka mid ah qorshayaashooda la wadaago oo miisaamaya illaa $ 3,92 bishiiba. Marka laga soo tago, marka mugga socodkaagu uu kici karo waxaad si sahlan uga gudbi kartaa qorshaha si aad u qorsheyso.
Mawaadlaha la qiimeeyo maaraynta maareynta maaraynta (daruuraha martigelinaya sida hooseeya USD 10 mēnesī)
Cadaalad – Bilowga iyo horumariye saaxiibtinimo leh Intuitive UI
Qiyaasta – Flexbile un aad kor ugu kacdo oo hoos u dhacdo marka ganacsigaaga uu kobciyo (ama gaabiyo)
Wixii qorshe ah gelitaanka Cloudways kasta wuu u fiican yahay ganacsiga yar yar. Waqtigan xaadirka qoraalka, Cloudways Digital Ocean iyo Cloudways, kas darbojas visaugstākajā skaitā, qiimaha ugu jaban. Wixii 10 USD / mēnesī iyo 11 USD / mēnesī ah, waxaad ka heli doontaa 1 GB servera serveris RAM iyo kaydinta 25 GB si, ja jūs esat martigeliso shabakadahaaga ganacsi ee yar.
Iyadoo ir 22% suuqyada suuqa ee ganacsadaha vietne-yada tartanka tartanka, Wix waa mid ka mid ah eeyaha ugu sarreeya. Waxay ku jirtay ganacsi muddo ka badan toban sano waxaana ay dadka isticmaala fursad u tahay inay abuuraan purvs internet oo cajiib ah oo dhowr ah. Waa hagaag, laga yaabee in badan, laakiin taasi waa fikrad guud – fudud!
Tifatiraha muuqaalka waxaa loogu talagalay inuu qof walba u oggolaado, xitaa kuwa aan lahayn aqoonta codka ah si ay si degdeg ah ula qabsadaan. Qeybinta boggaagu wuxuu noqon karaa mid sahlan sida xulashada template iyo wax ka bedelida ala Lego style.
Tifaftiraha aasaasiga ah wuxuu fursad u helayaa wax kasta oo ah goobta caadiga ah ee loo baahan yahay, laakiin haddii aad leedahay shuruudo dheeri ah oo aan laga helin halkaas, Wix waxay leedahay App Market oo kuu ogolaaneysa inahaagaoyaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaayaya.
Combo – USD 8,50 mēnesī
Neierobežots – USD 12,50 mēnesī
e-komercija – USD 16,50 mēnesī
VIP – USD 24,50 mēnesī
Halkan ka akhriso Timotejs ee qoto-dher Wix falanqaynta.
Kuwa ugu fiican ee loogu talagalay bogagga internetka ee ganacsi: Hostings Soo, Wix, A2 Hostings.
Xaaladda Daraasadda # 2: Hadafka Xogta ee Blog + Ganacsi vietne
Džūlija Cortana waxay bilawday eyga weyn eeyaha dabiiciga ah daaweynta dukaanka internetka si ay u siiyaan dadka isticmaala fursad ay ku siiyaan xayawaanka rabaayad gaar ah. La iibiyo daaweynteeda internetka waxay u baahan tahay inay liis gareyso oo iibiso iyada oo loo marayo goobteeda.
Si atkal loo sameeyo waxay u jeestay Wix. Tīmekļa vietne un kaulu samazināšanas diena Bone Zappetit oo leh xirfad farsamo oo yaryar halka Suuqa App-ka ayan gacan ka geysatey awoodda barta blogga iyo e-commerce kale oo ay ubaahantahay in a suu suuqa gasho.
Kharashka ku lug leh bilawga sida Bone Zappetit wuxuu u dhexeeyaa sida ugu hooseeya $ 12,50 bishiiba oo kor u kaca sida ganacsigu u korayo.
Kuwa ugu fiican ee loogu talagalay bogagga shabakadda ganacsiga: InMotion Hostings, Starpserveris, vietne SiteGround.
Xaaladda Daraasadda # 4: Xogta La Xidhiidha ee Dukaanka e-komercija / Online
Ku soo dhowaansho aad u fog migla oo kuyaal wareega ah Dukaameysi dukaamada internetka, Japan Objects STORE waxaa loogu talagalay inay soo bandhigto dhaqanka Japan, farshaxanka iyo naqshadeynta. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaloo leedahay alaab dhaqameed oo iib ah, sida Kimonos, Yukatas iyo Obi Belts.
Goobta cusubi aysan ahayn vidū la yaab leh, laakiin waxay ku šeit kartaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida ay u weyn tahay (oo lagu daray dukaanka eCommerce) waxaad ku dhisi kartaa dukaanka. Qurux badan oo qurux badan iyo isticmaal wanaagsan oo isku-dhafan oo muuqaal ah oo lagu qeexay qaab-dhismeed sahlan, Japāna Objekti STORE waa nadiif ah oo qallafsan.
Tilmaamaha Khidmooyinka Ganacsiga ee Ganacsiga (2020. gads)
InMotion hostings (oo leh Lacag dhimis gaar ah): 3,99 USD / mēn – 13,99 USD / mēn.
InMotion hostings waxay bixisaa martigelin aad loogu kalsoonaan karo oo qiimo macquul ah, taas oo noqon doonta meesha macaan ee ganacsiyada. Hordhaca Qorshaha (trīsreizējā mēnesī – 3,99 USD / mēnesī) – Wuxuu la yimaadaa domēna bilaash ah, SSL bilaash ah, iyo karte and ugu martigelin karto domains 2> Riix Halkan and Aqu InMotion Hostings.
Xoghayaha: USD 0,80 mēnesī / mēnesī – 3,45 USD mēnesī
Hostinger wuxuu leeyahay mid ka mid ah qorshayaasha martigelinta ugu raqiisan suuqa. Lagu qiimeeyo $ 0,80 / mēn, Rugaha Shirkadda Hal Meey waxay kuu oggolaaneysaa ir pieejams vairāk nekā tīmekļa vietnē oo leh 100GB joslas platums. Shakhsi ahaan waxaan qabaa in Hostinger uu ugu fiican yahay ganacsiyada doonaya inay martigeliyaan website fudud oo fudud Riix halkan si aad u booqato marti-qaadaha.
Atgādinājums: Isbarbardhig Sare Ganacsiga Yar ee Ganacsiga
Sida loo hirgaliyo vietne-kaaga hoyga cusub ee cusub